Xiaomi dia nanome patanty finday iray izay misy tontonana masoandro any aoriana | Androidsis
Xiaomi dia manaparitaka telefaona misy panneaux solaire any aoriana
Xiaomi dia iray amin'ireo marika mavitrika indrindra ankehitriny, izay miasa amin'ny maodely maro ankehitriny, sahala amin'ilay nohamarinin'izy ireo andro vitsivitsy lasa izay. Miasa maodely vaovao ny orinasa, toy ny efa navoakan'ny tsindry noho ny patanty vaovao. Drafitra izay tsy isalasalana fa ho mahaliana indrindra ary tadiavin'ny marika sinoa hanararaotra tsara kokoa ny vodin-telefaona.
Hatramin'ity tranga ity dia hitantsika finday avo lenta izay misy tontolon'ny masoandro any aoriana. Ka Xiaomi dia mitady hanome zavatra hafa ho an'ny mpampiasa. Ho fanampin'ny fanararaotana ny ao ambadiky ny telefaona, izay ampahany izay tsy dia ampiasaina firy.
Ny hevitra amin'ity tranga ity dia ity finday Xiaomi ity fampiasana an'ity tontolon'ny masoandro ity hiampangana ho azy. Ka ny mpampiasa dia hanana batterie sy fahaleovan-tena tsara hatrany amin'ny telefaona. Izay tena zava-dehibe ary tsy hita amin'ny telefaona maro.
Ny fisalasalana no fomba Nilaza ny panneaux solaire fa hampiharina amin'ny telefaona. Satria afaka mieritreritra izy fa lehibe kokoa ny hatevin'ny telefaona amin'ity tranga ity, ankoatry ny manahirana kokoa ny famolavolana sy ny fanamboarana azy, ny fampidirana ireo fifandraisana ilaina ao aminy.
Noho izany, misy fisalasalana momba ny tetikasan'i Xiaomi amin'ity lafiny ity. Ny marika sinoa dia mety handefa an'ity telefaona ity eny an-tsena, na mety ho patanty fotsiny izay anehoan'izy ireo hevitra amintsika fa tsy ho tanteraka izany avy eo. Na izany na tsy izany, mahaliana ny mahita ny zavatra nomanin'ny marika sinoa ary tadiavin'izy ireo hialana amin'ny mahazatra.
Raha manomboka izy dia miahiahy isika fa ho vonona amin'ity taona ity, noho izany mila miandry farafaharatsiny hatramin'ny taona 2020 isika. Hihaino tsara ny antsipiriany momba ity patanty Xiaomi ity sy ny mety hanombohana tsena isika. Ny telefaona miverina miakatra ho azy dia tsy isalasalana fa zavatra tadiavin'ny maro, ka ho hitantsika raha ho tonga any amin'ny magazay izy io sa tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi dia manaparitaka telefaona misy panneaux solaire any aoriana
Miseho ireo sary voalaza fa tena sarin'ny OnePlus 7T Pro